ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေနဲ့ ကိုဗစ် အန္တရာယ် (မိခင်လောင်းတွေ အတွက်) – 7Day Update News
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေနဲ့ ကိုဗစ် အန္တရာယ် (မိခင်လောင်းတွေ အတွက်)
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရရင် ဘယ်လောက် စိုးရိမ်ရသလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်သူတွေ တစ်နေ့တခြားပိုမို များပြားလာနေပြီး သေဆုံးသူတွေလည်း ပိုများလာချိန်မှာ အသက် ၄၃ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ ကလေးမီးဖွားပြီး ၇ ရက် အကြာမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန် ဗဟို အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးကို ကလေးမွေးဖွားဖို့ သူ ရောက်လာချိန်မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရှိနေတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ကလေးကိုလည်း ဗိုက်ခွဲပြီး မွေးခဲ့ရပါတယ်။ အရေးပေါ် ခွဲစိတ် မွေးထုတ်ပေးခဲ့ အပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ရှိလာလို့ ဓာတ်ခွဲနမူနာယူပြီး စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ ပိုးရှိနေကြောင်း သိရှိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးရှိနေတာ သိရပြီးနောက် ဖောင်ကြီး ကုသရေးဌာနကို ပို့လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ နာမည် ထုတ်ဖော် မပြောလိုကြတဲ့ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးက ဆရာဝန် အသိုင်းအဝိုင်းက တစ်ဆင့် သိရပါတယ်။ ကလေးမိခင် အမျိုးသမီးက စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ ကလေးကတော့ ရောဂါကူးစက်မှု မရှိဘဲ အခု အချိန်အထိ ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေနဲ့ ကိုဗစ် အန္တရာယ်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံရရင် နာတာရှည် ရောဂါအခံရှိသူတွေမှာ အန္တရာယ် ရှိသလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာလည်း အဲဒီလူတွေလိုပဲ သတိထား ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အုပ်စုထဲမှာ ပါတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ချုပ်က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေမှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ကူးစက်ခံရတဲ့ အခါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာ အရင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တုပ်ကွေးရောဂါ (Influenza)နဲ့ SARS ကူးစက်မြန် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတို့တုန်းက ဆေးပညာရှင်တွေ တွေ့ရှိခဲ့ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန် ဘယ်အချိန်မှာ အန္တရာယ် အကြီးဆုံးလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေမှာ ကိုယ်ဝန် ရင့်လာချိန် တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ်ကျော်လာချိန်မှာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကူးစက်ခံရရင် တော်တော် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်လေ့ရှိတာကြောင့် အခုလတ်တလော ကူးစက်မှု များနေတဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မယ် ဆိုရင်လည်း အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့ သားဖွားနဲ့ မီးယပ်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီ အဆင့်မှာ သူ့ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားက မွေးဖွားဖို့ လုံလောက်တဲ့ ကြီးထွားမှု မရှိသေးရင်လည်း မိခင်အသက်ရှူရ လွယ်အောင် စောစော မွေးထုတ်ပေးရတတ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရပြီး ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာ ရှိနေတဲ့ မိခင်တွေကို Ventilator စက်ကြီးတွေပေါ် တင်ပြီး ကုသတဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနိုင်လို့ ဗိုက်ထဲက ကလေးကို မွေးထုတ်ပြီးမှသာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို အဲဒီ စက်တွေပေါ် တင်ပြီး ကုသနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လူတန်မြို့ ဆေးရုံက သားဖွားနဲ့ မီးယပ်ဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာ မြကြာဖြူက ပြောပါတယ်။
ဒီအခါမှာ ကလေးတွေဟာ premature birth အချိန်မတိုင်ခင်မွေးရတဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်လာပြီး သူတို့မှာ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ်ကျော် မိခင်လောင်းတွေက ၂၈ ပတ်မပြည့်သေးတဲ့ မိခင်လောင်းတွေထက် ပို အန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့ ဒေါက်တာ မြကြာဖြူက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ် မိခင်ရဲ့ ဝမ်းထဲက ကလေးကို ရောဂါကူးနိုင်လား?
လောလောဆယ်မှာ မိခင်က ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေရင်တောင် သူ့ ဗိုက်ထဲက ကလေးကို ရောဂါကူးစေတဲ့ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ မတွေ့ရဘူးလို့ ရင်ခွင်မဲ့ ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဌာန အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး သားဖွားနဲ့ မီးယပ် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်တဲ့ အငြိမ်းစား ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မြသီတာက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေကို လေ့လာပြီးသလောက်ဆိုရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နေတဲ့ မိခင်ကြောင့် သန္ဓေသား ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးတာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာတို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ မရှိသေးဘူးလို့ သိထားရကြောင်းလည်း ဗြိတိန်က သားဖွားနဲ့ မီးယပ် အထူးကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာ မြကြာဖြူက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်လူနာ မိခင်က မီးဖွားပြီးရင် ကလေးနဲ့ အတူနေသင့်လား ?
သာမန်အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်သည်တွေ မီးဖွားပြီးပြီဆိုရင် ဆရာဝန်တွေက သူတို့ ရင်သွေးလေးတွေနဲ့ ချက်ချင်းတွေ့ခွင့် ပေးပြီး မိခင်နို့ချို တိုက်ကျွေးဖို့ အားပေးကြလေ့ ရှိပါတယ်။ မိခင်နဲ့ ကလေးကြားက နှောင်ကြိုး ခိုင်မာစေဖို့နဲ့ မွေးကင်းစကလေးက နို့ချိုစို့ခြင်းအားဖြင့် မိခင် နို့ပိုထွက်အောင် လှုံ့ဆော်ရာရောက်တဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင် ကူးစက်ပြန့်ပွားခါစ ကာလတုန်းကတော့ ပိုးရှိတဲ့ မိခင်က ကလေး မွေးလာပြီ ဆိုရင် သူ့ဆီကနေ ကလေးကို ကူးမှာ စိုးရိမ်တဲ့ အတွက် ကလေးနဲ့ အမေကို နှစ်ပတ်ကြာ ခွဲထားခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ မိခင်တွေရဲ့ ဆန္ဒအရ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေး တယ်လို့ ဒေါက်တာ မြကြာဖြူက ပြောပါတယ်။
မိခင်နို့ တိုက်လိုတဲ့ မိခင်တွေက ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်၊ သားဖွားနဲ့ မီးယပ် ဆရာဝန်တို့နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး သူတို့ ညွှန်ကြားချက်အရ တိတိကျကျ လိုက်နာ ပြီး နို့ချို တိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာလည်း ပိုးရှိတဲ့ မိခင်က ကလေးနဲ့ အတူနေပြီး နို့ချိုတိုက်ကျွေးချင်ရင် ကလေးကို ရောဂါ မကူးရအောင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အကြံပြုထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေ အတိုင်း လိုက်နာပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မြသီတာက ပြောပါတယ်။
ပိုးရှိ မိခင်က ကလေးကို နို့တိုက်ရင် ပိုး မကူးအောင် ဘယ်လို အထူးဂရုစိုက်ရမလဲ ?
ပိုးရှိတဲ့ မိခင်တွေက မွေးကင်းစ သားသမီးတွေကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးချင်တယ်ဆိုရင် ရင်ခွင်ထဲ ထွေးပွေ့ပြီးမှ တိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်လို့ အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးနဲ့ မထိတွေ့ခင် ကိုဗစ်ရောဂါသည် မိခင်က မဖြစ်မနေ လက်ဆေးရပါမယ်။ ကလေးနဲ့ အတူရှိနေတဲ့ အချိန် တစ်လျှောက်လုံးမှာ မိခင်က ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကို သေသေချာချာ အုပ်ထားရပါမယ်။ ကလေးပေါ်ကို နှာချေတာ၊ ချောင်းဆိုးတာမျိုး မလုပ်မိအောင် အထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ဗြိတိန် မှာတော့ Fluid Resistant Face Mask ဖြစ်တဲ့ Filtering Face Piece FFP2အဆင့် နှာခေါင်းစည်း သုံးရင် ကောင်းတယ်လို့ အကြံပြုကြောင်း ဒေါက်တာ မြကြာဖြူက ပြောပါတယ်။ ကလေးကိုတော့ အသက်ရှူကြပ်မှာစိုးတဲ့အတွက် Mask မတပ်ဖို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး ဌာနက အကြံပြုပါတယ်။
တကယ်တော့ ကလေးကို ရောဂါကူးတယ်ဆိုရင်တောင် ကလေးတွေက ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ခုခံတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့ အတွက် ရောဂါကူးစက်မခံရအောင် အထူးသတိထားဖို့ လိုသူတွေ ဆိုပြီး ကျန်းမာရေး ဌာန အသီးသီးက သတ်မှတ် သတိပေးထားတဲ့ အုပ်စုထဲက လူတွေလောက် မစိုးရိမ်ရပါဘူး။
ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်တွေမှာ ပင်ကိုယ်ရောဂါ အခံ မရှိဘူး ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ် အကူးခံရရင်လည်း မပြင်းထန်ဘဲ သာမန် ရောဂါ လက္ခဏာလောက်ပဲ ခံစားတတ်ကြရတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောပါတယ်။
ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှနေဲ့ ကိုဗဈ အန်တရာယျ (မိခငျလောငျးတှေ အတှကျ)
ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှေ ကိုဗဈ ကူးစကျခံရရငျ ဘယျလောကျ စိုးရိမျရသလဲ?
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျသူတှေ တဈနတေ့ခွားပိုမို မြားပွားလာနပွေီး သဆေုံးသူတှလေညျး ပိုမြားလာခြိနျမှာ အသကျ ၄၃ နှဈ အရှယျ အမြိုးသမီးတဈယောကျကတော့ ကလေးမီးဖှားပွီး ၇ ရကျ အကွာမှာ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
ရနျကုနျ ဗဟို အမြိုးသမီးဆေးရုံကွီးကို ကလေးမှေးဖှားဖို့ သူ ရောကျလာခြိနျမှာ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈပိုး ရှိနတော မသိခဲ့ပါဘူး။ ကလေးကိုလညျး ဗိုကျခှဲပွီး မှေးခဲ့ရပါတယျ။ အရေးပျေါ ခှဲစိတျ မှေးထုတျပေးခဲ့ အပွီး နောကျတဈရကျမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ လက်ခဏာတှေ ရှိလာလို့ ဓာတျခှဲနမူနာယူပွီး စဈဆေးခဲ့ရာမှာ ပိုးရှိနကွေောငျး သိရှိခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ပိုးရှိနတော သိရပွီးနောကျ ဖောငျကွီး ကုသရေးဌာနကို ပို့လှတျခဲ့တယျလို့ နာမညျ ထုတျဖျော မပွောလိုကွတဲ့ ဗဟိုအမြိုးသမီးဆေးရုံကွီးက ဆရာဝနျ အသိုငျးအဝိုငျးက တဈဆငျ့ သိရပါတယျ။ ကလေးမိခငျ အမြိုးသမီးက စကျတငျဘာလ ၂၂ ရကျနကေ့ သဆေုံးသှားခဲ့တာပါ။ ကလေးကတော့ ရောဂါကူးစကျမှု မရှိဘဲ အခု အခြိနျအထိ ကနျြးကနျြးမာမာ ရှိနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှနေဲ့ ကိုဗဈ အန်တရာယျ
ကမ်ဘာတဈဝနျး ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကူးစကျခံရရငျ နာတာရှညျ ရောဂါအခံရှိသူတှမှော အန်တရာယျ ရှိသလို ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှဟောလညျး အဲဒီလူတှလေိုပဲ သတိထား ဂရုစိုကျသငျ့တဲ့ အုပျစုထဲမှာ ပါတယျလို့ ကမ်ဘာ့ ကနျြးမာရေး အဖှဲ့ခြုပျက သတျမှတျထားပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှမှော အသကျရှူလမျးကွောငျးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှေ ကူးစကျခံရတဲ့ အခါ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဖွဈလရှေိ့တယျဆိုတာ အရငျက ဖွဈခဲ့တဲ့ တုပျကှေးရောဂါ (Influenza)နဲ့ SARS ကူးစကျမွနျ အသကျရှူလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါတို့တုနျးက ဆေးပညာရှငျတှေ တှရှေိ့ခဲ့ထားပွီး ဖွဈပါတယျ။
ကိုယျဝနျ ဘယျအခြိနျမှာ အန်တရာယျ အကွီးဆုံးလဲ
ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျတှမှော ကိုယျဝနျ ရငျ့လာခြိနျ တဈနညျးအားဖွငျ့ ကိုယျဝနျ ၂၈ ပတျကြျောလာခြိနျမှာ အသကျရှုလမျးကွောငျးဆိုငျရာ ရောဂါကူးစကျခံရရငျ တျောတျော ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဖွဈလရှေိ့တာကွောငျ့ အခုလတျတလော ကူးစကျမှု မြားနတေဲ့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမယျ ဆိုရငျလညျး အန်တရာယျကွီးတယျလို့ သားဖှားနဲ့ မီးယပျဆိုငျရာ ဆရာဝနျကွီးတှကေ ပွောပါတယျ။
အဲဒီ အဆငျ့မှာ သူ့ဗိုကျထဲက သန်ဓသေားက မှေးဖှားဖို့ လုံလောကျတဲ့ ကွီးထှားမှု မရှိသေးရငျလညျး မိခငျအသကျရှူရ လှယျအောငျ စောစော မှေးထုတျပေးရတတျပါတယျ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံထားရပွီး ကိုယျဝနျအရငျ့အမာ ရှိနတေဲ့ မိခငျတှကေို Ventilator စကျကွီးတှပေျေါ တငျပွီး ကုသတဲ့ အခါမှာ အခကျအခဲတှေ ရှိနိုငျလို့ ဗိုကျထဲက ကလေးကို မှေးထုတျပွီးမှသာ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျကို အဲဒီ စကျတှပေျေါ တငျပွီး ကုသနိုငျမှာ ဖွဈတယျလို့ ဗွိတိနျနိုငျငံ လူတနျမွို့ ဆေးရုံက သားဖှားနဲ့ မီးယပျဆိုငျရာ အထူးကု ဆရာဝနျ ဒေါကျတာ မွကွာဖွူက ပွောပါတယျ။
ဒီအခါမှာ ကလေးတှဟော premature birth အခြိနျမတိုငျခငျမှေးရတဲ့ ကလေးတှေ ဖွဈလာပွီး သူတို့မှာ နောကျဆကျတှဲ ကနျြးမာရေး ပွဿနာတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှေ အနနေဲ့ ဆိုရငျတော့ ကိုယျဝနျ ၂၈ ပတျကြျော မိခငျလောငျးတှကေ ၂၈ ပတျမပွညျ့သေးတဲ့ မိခငျလောငျးတှထေကျ ပို အန်တရာယျကွီးတယျလို့ ဒေါကျတာ မွကွာဖွူက ပွောပါတယျ။
ကိုဗဈ မိခငျရဲ့ ဝမျးထဲက ကလေးကို ရောဂါကူးနိုငျလား?
လောလောဆယျမှာ မိခငျက ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ ရှိနရေငျတောငျ သူ့ ဗိုကျထဲက ကလေးကို ရောဂါကူးစတေဲ့ အထောကျအထား ခိုငျခိုငျလုံလုံ မတှရေ့ဘူးလို့ ရငျခှငျမဲ့ ကလေးငယျမြား လြှော့ခရြေးနဲ့ ပွုစုစောငျ့ရှောကျရေးဌာန အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး သားဖှားနဲ့ မီးယပျ အထူးကု ဆရာဝနျကွီး ဖွဈတဲ့ အငွိမျးစား ပါမောက်ခ ဒေါကျတာ မွသီတာက ပွောပါတယျ။
လကျရှိ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုတှကေို လလေ့ာပွီးသလောကျဆိုရငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျနတေဲ့ မိခငျကွောငျ့ သန်ဓသေား ကလေးရဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှု နှောငျ့နှေးတာ ကိုယျဝနျပကျြကတြာတို့ ဖွဈတယျဆိုတဲ့ အထောကျအထား ခိုငျခိုငျလုံလုံ မရှိသေးဘူးလို့ သိထားရကွောငျးလညျး ဗွိတိနျက သားဖှားနဲ့ မီးယပျ အထူးကု ဆရာဝနျ ဒေါကျတာ မွကွာဖွူက ပွောပါတယျ။
ကိုဗဈလူနာ မိခငျက မီးဖှားပွီးရငျ ကလေးနဲ့ အတူနသေငျ့လား ?
သာမနျအားဖွငျ့ ကိုယျဝနျသညျတှေ မီးဖှားပွီးပွီဆိုရငျ ဆရာဝနျတှကေ သူတို့ ရငျသှေးလေးတှနေဲ့ ခကျြခငျြးတှခှေ့ငျ့ ပေးပွီး မိခငျနို့ခြို တိုကျကြှေးဖို့ အားပေးကွလေ့ ရှိပါတယျ။ မိခငျနဲ့ ကလေးကွားက နှောငျကွိုး ခိုငျမာစဖေို့နဲ့ မှေးကငျးစကလေးက နို့ခြိုစို့ခွငျးအားဖွငျ့ မိခငျ နို့ပိုထှကျအောငျ လှုံ့ဆျောရာရောကျတဲ့ အတှကျဖွဈပါတယျ။
ဗွိတိနျနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ စတငျ ကူးစကျပွနျ့ပှားခါစ ကာလတုနျးကတော့ ပိုးရှိတဲ့ မိခငျက ကလေး မှေးလာပွီ ဆိုရငျ သူ့ဆီကနေ ကလေးကို ကူးမှာ စိုးရိမျတဲ့ အတှကျ ကလေးနဲ့ အမကေို နှဈပတျကွာ ခှဲထားခဲ့ပမေဲ့ အခုတော့ မိခငျတှရေဲ့ ဆန်ဒအရ ဆုံးဖွတျခှငျ့ပေး တယျလို့ ဒေါကျတာ မွကွာဖွူက ပွောပါတယျ။
မိခငျနို့ တိုကျလိုတဲ့ မိခငျတှကေ ကလေးအထူးကု ဆရာဝနျ၊ သားဖှားနဲ့ မီးယပျ ဆရာဝနျတို့နဲ့ တိုငျပငျပွီး သူတို့ ညှနျကွားခကျြအရ တိတိကကြ လိုကျနာ ပွီး နို့ခြို တိုကျကြှေးနိုငျပါတယျ။ မွနျမာ နိုငျငံမှာလညျး ပိုးရှိတဲ့ မိခငျက ကလေးနဲ့ အတူနပွေီး နို့ခြိုတိုကျကြှေးခငျြရငျ ကလေးကို ရောဂါ မကူးရအောငျ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက အကွံပွုထားတဲ့ ညှနျကွားခကျြတှေ အတိုငျး လိုကျနာပွီး လုပျဆောငျနိုငျတယျလို့ ပါမောက်ခ ဒေါကျတာ မွသီတာက ပွောပါတယျ။
ပိုးရှိ မိခငျက ကလေးကို နို့တိုကျရငျ ပိုး မကူးအောငျ ဘယျလို အထူးဂရုစိုကျရမလဲ ?
ပိုးရှိတဲ့ မိခငျတှကေ မှေးကငျးစ သားသမီးတှကေို နို့ခြိုတိုကျကြှေးခငျြတယျဆိုရငျ ရငျခှငျထဲ ထှေးပှပွေီ့းမှ တိုကျနိုငျမှာ ဖွဈလို့ အထူးဂရုစိုကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ကလေးနဲ့ မထိတှခေ့ငျ ကိုဗဈရောဂါသညျ မိခငျက မဖွဈမနေ လကျဆေးရပါမယျ။ ကလေးနဲ့ အတူရှိနတေဲ့ အခြိနျ တဈလြှောကျလုံးမှာ မိခငျက ပါးစပျနဲ့ နှာခေါငျးကို သသေခြောခြာ အုပျထားရပါမယျ။ ကလေးပျေါကို နှာခတြော၊ ခြောငျးဆိုးတာမြိုး မလုပျမိအောငျ အထူးဂရုစိုကျရပါမယျ။
ဗွိတိနျ မှာတော့ Fluid Resistant Face Mask ဖွဈတဲ့ Filtering Face Piece FFP2အဆငျ့ နှာခေါငျးစညျး သုံးရငျ ကောငျးတယျလို့ အကွံပွုကွောငျး ဒေါကျတာ မွကွာဖွူက ပွောပါတယျ။ ကလေးကိုတော့ အသကျရှူကွပျမှာစိုးတဲ့အတှကျ Mask မတပျဖို့ ဗွိတိနျနိုငျငံ ကနျြးမာရေး ဌာနက အကွံပွုပါတယျ။
တကယျတော့ ကလေးကို ရောဂါကူးတယျဆိုရငျတောငျ ကလေးတှကေ ဒီဗိုငျးရပျဈကို ခုခံတိုကျထုတျနိုငျတဲ့ ကိုယျခံအားကောငျးတဲ့ အတှကျ ရောဂါကူးစကျမခံရအောငျ အထူးသတိထားဖို့ လိုသူတှေ ဆိုပွီး ကနျြးမာရေး ဌာန အသီးသီးက သတျမှတျ သတိပေးထားတဲ့ အုပျစုထဲက လူတှလေောကျ မစိုးရိမျရပါဘူး။
ကလေးတှနေဲ့ လူငယျတှမှော ပငျကိုယျရောဂါ အခံ မရှိဘူး ဆိုရငျ ဗိုငျးရပျဈ အကူးခံရရငျလညျး မပွငျးထနျဘဲ သာမနျ ရောဂါ လက်ခဏာလောကျပဲ ခံစားတတျကွရတာ တှရေ့တယျလို့ ဆရာဝနျတှကေ ပွောပါတယျ။
သောကကငျးစငျငှဝေငျအစီရငျ ယုံကွညျစှာလုပျဆောငျပါက အကြိုးထူးမြားသညျ